Igumbi eliphindwe kabini kwisiXeko seVictorian House
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguDerek
Igumbi eliphindwe kabini kwindawo enkulu, enesitayile seVictorian. Indlu isembindini wesixeko kuMlambo iTaff kunye neTaff Trail. Icoceke ngokukhethekileyo. Zonke iindwendwe zishiye i-5 Star ratings. Ucoceko lwarhoqo. Yehla ngomlambo uyonwabele iCardiff Bay kunye neWales Millennium Centre okanye unyuke umlambo uye eCardiff Castle, amabala epaki kunye nezitiya. Ibala lemidlalo libona indlu kunye nemizuzu emi-3 ukuhamba, kunye nendawo yomculo yeTramshed. Isitishi esiseMbindini kukuhamba nje imizuzu emi-5.
Indlu inemvakalelo efudumeleyo, yemveli kodwa yangoku yeVictorian. Kukho igumbi lokuhlambela elikhulu kufutshane negumbi eliphindwe kabini elisetyenziselwa abantu ababini kuphela. Kukho iikati ezi-2, uJake kunye noMaurice, abahlala ezantsi kwigumbi lokuhlala / ekhitshini nakwigadi yangasemva :-)
Uya kuba kanye entliziyweni yesixeko. Zonke iivenkile eziphambili, iikhefi, iindawo zokutyela kunye neebhari kukuhambo olufutshane nje. Okanye ukuba ukhetha enye into yasekhaya, iGrangetown ikwasemnyango.
Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ngayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Ndihlala endlini kwaye ndiza kukukhangela ngovuyo kwaye ndikuphendule yonke imibuzo onokuba nayo malunga nesixeko.